Olee otú Download PBS Videos na One Click
> Resource> Video> Olee Otú Ị Pụrụ Download PBS Videos maka playback
Ebe ọ bụ na ị bụ ebe a, ị gaghị enwe-amaghị na PBS. Ọ bụ obere okwu n'ihi na Public Broadcasting Service, nke bụ oké ọdịnaya na-eweta nke ihe omume telivishọn na United States, gụnyere zuru-nwunye TV na-egosi na ndị ọzọ. Mgbe ụtọ nkwanye videos na ya website, Ohere inweta bụ i nwere ike na-ahọrọ ibudata ma na-ekiri PBS videos na gị obere ngwaọrụ mgbe njikọ Ịntanetị adịghị. Olee otú ị pụrụ nweta ahụ? Echegbula. Ebe a bụ a na-apụtakarị ihe ngwọta. The Wondershare AllMyTube (AllMyTube for Mac) nwere ike ibudata niile vidiyo si na PBS na ọbụna ekwe ka ị tọghata ha ndị ọzọ formats iji na na na gị obere ngwaọrụ, dị ka iPad, iPhone na ọtụtụ ndị ọzọ. Ka anyị hụ otú o si arụ ọrụ n'okpuru.
Akpa ibudata a omume awụnyere na kọmputa gị. Cheta na-ahọrọ nri version maka PC gị ma ọ bụ Mac. Na anyị ga-Windows version dị ka ihe atụ na-esonụ na paragraf ebe ọ bụ na abụọ nsụgharị na-arụ ọrụ ahụ.
1 Access vidiyo na PBS
Gaa PBS si website ịchọta videos-amasị gị na pịa ha na-egwu. Otu ihe na-echeta bụ na-egwu videos na otu nke na-esonụ nchọgharị: ntụgharị, Firefox na Chrome iji na videos nwere ike achọpụtara site usoro ihe omume.
2 Download vidiyo si na PBS
Mgbe video na-akpọ, i nwere ike ịhụ a Download button n'elu nri nke video ihuenyo. Pịa bọtịnụ na usoro ihe omume ga-amalite ibudata video.
Otu ọzọ ụzọ ibudata videos bụ idetuo URLs na pịa Paste URL bọtịnụ iji malite usoro.
3 tọghata videos ndị ọzọ formats
Mgbe videos na-ebudatara, i nwere ike ịhụ ha na ebudatara taabụ. Ugboro abụọ pịa videos na na na na kọmputa. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ igwu vidio na gị obere ngwaọrụ, i nwere ike mkpa iji tọghata videos mbụ. Pịa tọghata bọtịnụ na nri nke video ihe na-ahọrọ a format na ị chọrọ. Pịa OK na-amalite converting usoro.
Cheta na: Ọ bụrụ na a usoro ada ada ibudata PBS videos ruru akwusighi nke njikọ Ịntanetị, i nwere ike iji ndekọ ọrụ kama.
Nnọọ mfe, ọ bụghị ya? Ị nwere ike iji nke a PBS video Downloader ibudata dị ka ọtụtụ videos dị ka omume. Ọ nwekwara ike ibudata vidiyo si na ọtụtụ ndị ọzọ na saịtị dị ka YouTube, Vimeo, Dailymotion na ọtụtụ ndị ọzọ. Dị nnọọ download otu na-enye ya a-agbalị. Ị na-aga na-amasị ya.
Olee otú iji tọghata MKV ka Nexus 7 n'ihi na Ezigbo playback
Olee otú dọwara Movies si weebụsaịtị